Arakan Times – Page 10
September 24, 2017	Leaveacomment 3,916 Views
September 24, 2017	Leaveacomment 572 Views
24 September 2017 Shamila clutches her daughter’s hand so tightly it turns white as she recounts how soldiers broke into her home in Myanmar and gang-raped her in front of her children —astory heard over and over in Bangladesh refugee camps. UN observers say they have seen scores of rape and gang rape survivors among the Rohingya who ...
Myanmar authority conspires against Rohingya for ethnic cleansing in Minbya
September 24, 2017	Leaveacomment 516 Views
24 September 2017 AT Correspondent, Minbya A Rohingya has been arrested by Myanmar joint forces of military and BGP without any legal ground from TangSeit village of Minbya Twonship, Arakan State on 24 September 2017 at around 12: 00 am. The victim has been identified as U Kasim (30) son of Umal Khan of TangSeit village, Minbya. He has been ...
BD Govt. takes plan to relocate Rohingya refugees to ‘Tengarchor’
September 23, 2017	Leaveacomment 519 Views
23 September 2017 AT Online Report Bangladesh government is working withaplan to resettle the Rohingya refugees toacertain area in future, according to Teknafnews desk. As per the plan of the government, the ‘Tengharchor’, an isolated island of Hatiya police station under Noakhali district is being made up as an appropriate place for residence of Rohingya refugees. ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များအား စစ်ဆင်ရေး ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ကာ ဖမ်းဆီး နှိပ်ကွပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့် လူပေါင်း အမြောက်အများ သေဆုံးကာ၊ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်
September 23, 2017	Leaveacomment 326 Views
#ArakanTimes Burmese ၁။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ( အမှတ်၅) တပ်မတော် စစ်ဆင်ရေး။ ၂။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဘီတီအေဖ် (BTF) စစ်ဆင်ရေး။ ၃။ အမှတ်(၁၅)ချင်း ခြေလျင်တပ် စစ်ဆင်ရေး။ ၄။ ၁၉၅၂- ၅၃ မေယု စစ်ဆင်ရေး။ ၅။ ၁၉၅၄ မုတ်သုန် စစ်ဆင်ရေး။ ၆။ ၁၉၅၅ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် တပ်မတော်ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေး။ ၇။ ညီညွတ်သော တပ်မတော်အင်အား စစ်ဆင်ရေး။ ၈။ ၁၉၅၉ captin ထင်ကျော် စစ်ဆင်ရေး။ ၉။ ၁၉၆၆ အောက်တိုဘာလ ရွှေကျီး စစ်ဆင်ရေး။ ၁၀။ ၁၉၆၆ ဒီဇင်ဘာ ကျီးကန်း စစ်ဆင်ရေး။ ၁၁။ ၁၉၆၇- ၆၉ ငဇင်ကာ စစ်ဆင်ရေး။ ၁၂။ ၁၉၇၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ...
September 23, 2017	Leaveacomment 404 Views
ဘူးသီးတောင်မြို့၊မီးကျောင်းဈေးကျေးရွာအုပ်စုရှိအာရဘီတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း၂၂၊၉၊၂၀၁၇ခုနေ့နံနက်၁၁း၀၀နာရီခန့်အချိန်တွင်ဗုံးတစ်လုံးဖောက်ခွဲခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအာရဘီတက္ကသိုလ်အဆောင်၌နယ်မြေရှင်းလင်းစစ်တပ်များကမကြာခဏစခန်းချတည်းလေ့ရှိပါသည်။စစ်တပ်များတည်းခဲ့စဉ်ချိန်ကိုက်ဗုံးထောင်ထားခဲ့သည်သာဖောက်ခွဲကြောင်းဒေသခံများကArakan Timesသို့ပြောပါသည်။ ဗုံးဖောက်ခွဲပြီးခဏအကြာ၌နယ်ခြားစောင့်များနှင့်စစ်တပ်များလာရောက်၍ရွာသားများအားမဟုတ်မမှန်စကားများသင်ပေးကာ ဗီဒီယိုရိုက်ယူသွားကြပါသည်။ဗီဒီယိုရိုက်ကူးစဉ်သင်ပေးသည့်အတိုင်းမပြောပါကရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ပစ်ပြီးရွာသားအကုန်လုံးကိုထောင်သို့ပို့မည်ဟုနယ်ခြားစောင့်ကခြိမ်းခြောက်ပါသည်။ စစ်တပ်၏လုပ်ကြံမှုမဟုတ်လျှင်Media Team မပါဘဲနယ်ခြားစောင့်နှင့်စစ်တပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဘယ်ကြောင့်ဗီဒီယိုရိုက်ယူသည်ကိုသုံးသပ်နိုင်ကြောင်း၊ကမ္ဘာကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားနေကြောင်းရွာသားများကAT burmeseသို့ပြောပါသည်။
Landmine planted by Myanmar forces exploded at mosque in Buthidaung
September 22, 2017	Leaveacomment 674 Views
22 September 2017 AT Correspondent, Buthidaung A landmine planted by Myanmar security forces at the compound of central mosque in MiKyaungZee (Mingizee) village of Buthidaung north exploded today 22 September, according to our correspondent report. The incident of the explosion took place at the compound of the mosque of Rohingya residents at around 10.45 am. But there was no casualty ...
$200mn needed for Rohingya refugees in Bangladesh for6months: UN
September 22, 2017	Leaveacomment 257 Views
22 September 2017 Reuters, Dhaka The United Nations estimates that $200 million will be needed over the next six months to help Rohingya Muslims refugees who have fled to Bangladesh from Myanmar in “massive numbers” to escapeamilitary campaign. Bangladesh and humanitarian organisations are struggling to help 422,000 Rohingya who have arrived since August 25, when attacks by Rohingya ...